Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Lasa fanaovana afera maloto ny pôlitika !
Inty sy nday: Lasa fanaovana afera maloto ny pôlitika !
Lasa sokajian’ny olon-tsotra ho zavatra maloto sy loza ny « pôlitika » nefa ny olona manao azy eto, amin’ny ankapobeny, no mandoto sy mampitera-doza azy io. Izahay dia manipika anefa fa ny pôlitika dia raharaha azo ambara ho isan’ny masina. Ny antony dia satria ny tetika sy asa rehetra atao ho fanatsarana sy fandaminana ary fanasoavana ny fiaraha-monina sy ny olona ao anatiny no antsoina hoe « pôlitika ». Izay no tokony ho tsapan’ny rehetra. Noho izany, arakaraka ny itsoahan’ny tsara sitra-po sy ny olo-marina amin’ny raharaha pôlitika no ihazakazahan’ny olon-dratsy sy ny mpanararaotra miditra ao sy maka laka ary ataony sehatra amotehany ny fiaraha-monina izany pôlitika izany.
Manana anjara andraikitra izany ny tsirairay tsara sitra-po hametraka ho zava-dehibe sy ambony karazana, eny hanamasina mihitsy aza ny « raharaha pôlitika ».
Raha itodihana tokoa ange ny tantara ka nisy fiovana be ny tontolon-draharaha pôlitika teto tato anatin’ny 30 taona farany e !
Izahay tsy milaza hoe « tena nanao pôlitika » ny mpanao pôlitika tany ambadika ny 30 taona fa mahatsapa kosa hoe nisy fanajana ny farafahakelin’ny soatoavina amin’ny fanaovana pôlitika teto tamin’izany fotoana. Ekena fa nisy ny mpanao pôlitika tamin’izany no nivaro-tena, nivarotra tanindrazana, nanao izay tsy hikatsahana afa-tsy ny tombontsoany manokana, saingy aoka kosa hotsorina fa tsy nandre mpanao pôlitika isika ka hoe nifampiraharaha an-tsokosoko tamin’ny mpandroba harem-pirenena na nanao izay tetika hanodinkodinam-bolam-panjakana mivandravandra.
Izahay dia manaiky fa tamin’ny Repoblika voalohany no nanombohan’ity fakana ambony ampanga amin’ny tsenam-baro-panjakana (marché public) ity, ary ny minisitra Jacques Rabemananjara aza tamin’izany dia nahazo anaram-bositra hoe « Monsieur le 10% » satria izy no minisitra voalohany teto naka an’io 10% io amin’izay nomena tsenambaro-panjakana.
Izahay koa dia mahatsapa fa nisy tamin’ny mpanao pôlitika teto, indrindra fa ireo tafakatra teo amin’ny fahefam-panjakana, no niezaka nifampiraharaha sy namatotra ny firenena malagasy tamin’ny vahiny any ivelany, ary nanara-davahana izany izay tonga teo amin’ny fitondrana taty aoriana rehetra, saingy hafa ny zava-misy amin’izao fotoana fa tena tsy misy mieritreritra ny hanao pôlitika intsony ny olona izao raha tsy hanao afera maloto.
Heverin’ny olona sasany amin’izao fotoana fa ny fanaovana pôlitika dia ny hahatafidirana ao anatin’ny fitondram-panjakana satria izay no antoka hampanan-karena haingana.
Dia araho maso fa tato anatin’ny 25 taona farany no nihazakazahan’ny sokajin’olona tsy nieritreritra ny hanao pôlitika niditra tao anatin’io sehatra io. Ny manam-bola dia nihevitra koa fa ho mora aminy ny miditra manao pôlitika mba hahazoana fahefam-panjakana hampitomboana ny efa ananana. Ny tsy nanana moa dia nanararaotra satria izay no antoka hampanan-karena. Dia izao iarahantsika mahita izao fa azo isaina amin’ny rantsan-tanana 10 ny tena « mpanao pôlitika matihanina » mitana sy miezaka manaja ny soatoavina momba izany sisa fa ny ankamaroany na ny ankoatra izay dia ny hanao afera maloto no mahadodona azy hanao pôlitika.
Tsy mahagaga raha tsy mitsaha-mitotongana toa izao ny fiainam-bahoaka.
Ho avy indray mantsy izsao ny fifidianana afaka herin-taona eo, dia hisy mpanao afera maloto marobe haka ny fon’ny ambanilanitra, ka tokony hieritreritra ihany isika vahoaka hoe « afo efa nandoro ny lambantsika ve dia mbola kopahintsika hahazo aina sy hiredareda hatrany? »